A na-emepe izu mmiri mmiri ụwa na Stockholm
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » A na-emepe izu mmiri mmiri ụwa na Stockholm
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ndị ndu ụwa, ndị okacha mmiri, ndị ọrụ mmepe, ndị na-eme iwu, na otu onye na-aga mbara igwe, ezukọtala na Stockholm maka nzukọ otu izu na-elekwasị anya n'ịchọta ụzọ iji mee ka ọ ka mma, ma jiri ya mee ihe, ụkọ mmiri dị ụkọ n'ụwa.
Dika nsogbu nke ndi n’eto eto na enweghi mmiri ocha na adi n’uwa dum, nghota na etolite n’etiti ndi n’eme iwu, ulo oru, na umu amaala na anyi kwesiri ibu ndi n’eji eme ihe nke oma.
“Izu Mmiri Uwa iswa bụ ebe dị mkpa maka nzukọ mmiri na mmepe obodo; ọ bụ ebe a ka anyị gbakọtara wee hụ na e webatara echiche ndị kachasị mma, "Onye isi oche SIWI kwuru, Torgny Holmgren.
Onye isi oche nke General Assembly nke United Nations, Peter Thomson, kpọrọ ihu igwe na mmiri mmiri ụwa "ntọala nke ịdị adị anyị", wee kwuo na "Ọ bụrụ na enweghị nlekọta kwesịrị ekwesị nke ntọala ahụ, atụmatụ mmepe mmepe nke 2030 enweghị ebe ọ bụla. N'ihi na e nweghị ntọala anyị anyị agaghị adị. ”
Onye na-enyocha mbara igwe na onye otu ụlọ akwụkwọ Royal Academy of Science nke Sweden, Christer Fuglesang kọwara sistemụ mmiri dị egwu dị mkpa n'oge ọrụ mbara igwe, na-enyere nri aka toro n'ụgbọ mmiri, ma hụ na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na - enye aka ịkọwapụta nyocha, ma bulie usoro maka enwekwu ike ojiji mmiri n’elu ụwa.
Isiokwu nke izu ahụ, Mmiri na ihe mkpofu: Belata ma jigharịa, metụta isi ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị. Iji belata, ụfọdụ mgbanwe gbara ọkpụrụkpụ ga-adị mkpa - ọkachasị ndị isi na-a waterụ mmiri, gụnyere ụlọ ọrụ, ndị na-emepụta ike na ngalaba ọrụ ugbo, “SIWI 'Torgny Holmgren kwuru.
Ọ gbakwụnyere na a chọkwara mgbanwe n'otú anyị si eche echiche banyere iji mmiri eme ihe: “Echere m na ọ dị ezigbo mkpa ịnwale ma gbanwee echiche banyere ihe mkpofu. Kama inye anyị nsogbu, anyị nwere ike iwere n'efu ka ihe bara uru. ”
Stephen McCaffrey, 2017 Stockholm Water Prize Laureate na Prọfesọ na iwu mmiri, kwuru maka mkpa ọ dị maka nkwado mmiri na diplomacy mmiri. Ọ gwara ndị sonyere na ọ bụ ezie na ihe ndị ahụ maka esemokwu mmiri nwere, dị ka nrụgide dị elu nke ndị mmadụ, mgbanwe ihu igwe, na ọtụtụ mmiri ọ freshụ world'sụ nke mba abụọ ma ọ bụ karịa na-ekerịta, ọmụmụ ihe na-egosi na ikekọrịta mmiri ga-eduga na imekọ ihe ọnụ karịa esemokwu.
Ụgbọ elu San José na Chicago na -alaghachi na American ...
Bahamas Summer Boating Flings ugbu a na ngwa zuru ezu